Trump iyo Biden waxay amreen amaro iskahorjeedo la dagaalanka Al Shabab - Home somali news leader
Home NEWS Trump iyo Biden waxay amreen amaro iskahorjeedo la dagaalanka Al Shabab
Trump iyo Biden waxay amreen amaro iskahorjeedo la dagaalanka Al Shabab
Al Shabab waxay kordhisay joogitaankeeda dhuleed iyo rabshadaha sii kordhaya ee Soomaaliya shantii bilood ee la soo dhaafay taas oo ay ugu wacan tahay go’aanada siyaasadeed ee ka soo baxay maamullada Trump iyo Biden ee carqaladeeyay tababbarka ciidamada Soomaaliya iyo ku darista lakabyo xafiisyo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, ayay leeyihiin khubarada amniga Afrika.
Markii uu madaxweynihii hore Donald Trump amar ku bixiyay in 900 oo askari ay ka baxaan Soomaaliya bishii Diseembar, iyada oo ay awood u yeelatay in ay fuliso weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka imanaya Muqdisho, taas oo argagixisada Soomaaliyeed siisay xoriyad ay ku xasuuqaan oo ay ku sii xoogaystaan.
Taliska Mareykanka ee Afrika waa inuu hadda u duuliyaa askarta Soomaaliya soo galaya iyo kuwa ka baxaya Soomaaliya si ay u helaan tababarro gaagaaban iyo duullimaadyo dhaadheer oo kuwa aan duuliyaha lahayn ah oo laga soo qaado kumanaan mayl meel u dhow, ayay leeyihiin khubarada amniga.
Arrinta, qayb ahaan, waa amar maamulka Biden oo ah in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay weeraraan meel ka baxsan saddex aagag dagaal muddo dheer socdey waa in laga oggolaadaa Aqalka Cad.
“Runtii waan u damqan karaa labada hoggaamiye fulinta rabitaankooda ah inaanan ka hawlgalin Soomaaliya, laakiin dhibaatadu ma aha mid sii soconaysa,” ayuu yidhi Col. Chris Wyatt oo hawlgab ah oo ka tirsan ciidamada Mareykanka oo la hadlay Washington Examiner.
“Al Shabab wali ujeedooyin ayey leedahay, walina waxy ku weeraraan si ciqaab la’aan ah. Waxay umuuqataa, gaar ahaan magaalada Muqdisho, inay wax qarxiyaan oo ay weeraraan dadka,” ayuu raaciyay. “Trump markii uu amrayay bixitaanka ciidamada, ka dibna Biden oo xayiraad saaray adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, labaduba sida muuqata saameyn xun ayey ku yeelan karaan waxa aan ku qaban karno halkaas marka laga hadlayo Al-shabaab
Africom waxay sii wadaa dooddeeda ah in Al Shabab ay leedahay hami caalami ah oo ay ku garaacdo dalka Mareykanka.
“Maanta, Al Shabab waa laanta ugu weyn uguna fir fircoon ee dhanka fir fircoonida qaramada midowga afrika,” ayuu yiri afhayeenka ciidamada cirka ee Africom Col. Chris Karns oo dhawaan u waramay Washington Examiner.
“U.S. Howlaha Taliska Afrika ee looga hortagayo Al Shabaab waxay matalayaan ballanqaadka difaaca Mareykanka iyo u adeegsiga sidii looga hortagi lahaa muwaadiniinta Mareykanka, ”ayuu yiri. “Mareykanku wuxuu bartay cashar aad u xanuun badan Sept. 11, 2001, oo ay ku dhinteen dad badan oo Mareykan ah. Al Shabab waa garab ka mid ah Al Qaacida. ”
Maamulka Biden ayaa ku soo rogay Janaayo 20 xayiraad isticmaalka duullimaadyada aan duuliyaha lahayn ee ka baxsan Afghanistan, Ciraaq, iyo Suuriya. Gadood kasta oo ka baxsan aagagga dagaalka ayaa hadda u baahan oggolaanshaha Aqalka Cad.
“Waxaan filayaa in ay sababi karto in aynaan helin bartilmaameedyo,” ayuu yiri Wyatt, isaga oo qiimeynaya dib u dhaca dhici kara marka bartilmaameedka Soomaaliya la aqoonsado, iyo amarka taliska ee ka soo baxay xarunta Africom ee Stuttgart, Jarmalka, waa la daahiyay illaa iyo inta Qaranka laga gaarayo Golaha Amniga ee Washington, ama Madaxweyne Biden laftiisa, ayaa oggolaada ama diida codsiga.
Afhayeen u hadlay Africom ayaa u sheegay Washington Examiner in taliska uu wali la dagaallamayo argagixisada inkasta oo awaamiir siyaasadeed la siinayo.
“In kasta oo xaddidnaanta ka-hadalka fool-ka-fool ay caqabad ku tahay, shaqadeennu waa inaan xallino dhibaatooyinka adag,” ayuu yiri afhayeenka.
“Waxaan awoodnay inaan ilaalino cilaaqaadkeena, tababarka, iyo taageerada howlgalka ee wada-hawlgalayaasha iyadoo loo marayo isgaarsiin dagaal badan iyo booqashooyin isdaba joog ah oo aan dib ugu laabanno Soomaaliya,” ayuu yiri wakiilka. “Anaga iyo la-hawlgalayaasheena waxaan sii wadnay inaan ka daba tagno Al-Shabaab inta lagu jiro iyo kadib dib-u-helidda.”
Laakiin si cad, awooda Africom ee ay ku weerareyso Al Shabab ayaa saameyn ku yeelatay.
Weerarada diyaaradaha aan duuliyuhu wadin hadda waa inay ka duulaan saldhigyo kumanaan mayl u jira, sida saldhig cirka ah oo ku yaal Jabuuti, oo ah halka keliya ee ay Afrika ku rakibtay militariga Mareykanka. Taliska Mareykanka ee Afrika ma shaaciyo halka ay ka bilowdaan duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha laheyn, laakiin tirada duqeymaha tan iyo markii laga saaray ciidamadu si deg deg ah ayey hoos ugu dhacday.
Sanadkii 2020, Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa 51 duqeyn ka fuliyay Soomaaliya oo ka dhan ah Al Shabaab iyo mid ka dhan ah bartilmaameedka Daacish. Amarka Trump ka dib, waxaa jiray lix duqeyn oo cirka ah, seddex ka hor iyo seddex kadib markii dib u dhigista ciidamada la dhammeeyay.
Africom waxay raacday kooxda argagaxisada ah iyadoo sirdoonkeeda ku wareejisay la-hawlgalayaal Soomaali ah oo aan awood badnayn.
“Waxaan wali awoodnaa inaan horumarino bartilmaameedyada isla markaana aan u gudbinno kuwa aan iska kaashanayno sidii aan si isdaba joog ah u sameyn jirnay waqtiyadii la soo dhaafay,” ayay tiri Africom, iyadoo xustay in weerarada diyaaradaha aan la wadin kaliya la isticmaalo marka qaabab kale “aan la heli karin ama aan macquul aheyn.”
Afhayeenka ayaa intaa ku daray: “Al Shabab wali waxay qatar badan ku jirtaa ciidamada aan iskaashaneyno.”
Duulimaad, tababar duulimaad ah
Toban sano ka hor, Wyatt waxaa la geeyay Ciidanka Bariga Afrika, mid ka mid ah sideed safar oo Afrika ah oo uu ka soo shaqeeyay Waaxda Difaaca.
Waqtigaas, wuxuu ka soo horjeeday joogitaanka militariga Mareykanka ee ku sii kordhaya Soomaaliya.
“Waan shaqeynayay, marka ma ahan wax aan ka hadlay, laakiin shaqsi ahaan, waan kasoo horjeeday,” ayuu yiri, isagoo xasuusanaya xilligii Mareykanku bilaabay inuu xoojiyo joogitaankiisa Soomaaliya.
Kadib, wuxuu xiriirin jiray barnaamij loo adeegsaday dhaqaalaha Wasaaradda Arimaha Dibadda si loogu bixiyo tababarayaasha militariga Midowga Yurub ee la shaqeeya ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ee ku sugan Uganda.
“Aniga aragtidayda, taasi waxay ahayd qaab wax ku ool ah oo loo sameeyo,” ayuu yiri.
Qaabkii lagu gaadhay ujeeddooyin dhowr ah: Waxay tababartay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, waxay iska ilaalisay welwelka amniga ee ka jira gudaha Soomaaliya, waxayna bixisay biilasha iyada oo aan la helin
Previous articleTrump and Biden orders complicate Africa Command’s fight against al Shabab
Next articleThousands of parties violate Covid-19 restrictions to attend Marseille’s carnival